Dinidiniky ny fanorenana ifotony - « Tokony hahazaka ny fahaleovantena isika »
Accueil » Politique » Dinidiniky ny fanorenana ifotony – « Tokony hahazaka ny fahaleovantena isika »
Dinidiniky ny fanorenana ifotony – « Tokony hahazaka ny fahaleovantena isika »
Finaritra hatrany ny tenako mihaona aminareo amin’izao dinikin’ny fanorenana ifotony izao. Miarahaba sy mirary fahasalamana ho an’ny isa-tokantrano.
Hanamarika ny datin’ny 26 jona isika. 61 taona izao no mankalaza io daty io ny Malagasy. Mifaly sy mitotorebika satria nahazo fahaleovantena.
Saingy hatramin’izay ka hatramin’izao dia tsy voavalin-tsika ny fanontaniana hoe: Tena zakantsika marina ve ny fahaleovantena nomena antsika? Zakan’ny firenena? zakan’ny isa-tokantrano? zakan’ny isam-batan’olona?
Raha tena zakantsika ny fahaleovantena dia tsy tahaka izao no toerana misy ny firenentsika. Mbola nozaraina sy nangatahana fanampiana tetsy sy teroa ilay fahaleovantena.
Asa raha mazava amintsika ny tiako ambara androany:
Tsy nozarain’ny mpitondra nifandimby hiarahana mizaka hatreny ifotony ny fahaleovantena fa naleon’izy ireo nanome avara-patana ny any ivelany.
Mbola ifampizaran-tsika amin’ny any ivelany, anombinany, sy hakàny tombony, ny fahaleovantena azontsika. Nozaraina amin’ny any ivelany ny fitantanana, nozaraina sy nomena azy ny toekarena hanjakany.
Hatramin’izay ka hatramin’izao, iankinan-doha amin’ny any ivelany ireo sehatra maro. Eny fa na ny fihariana aza. Mifaninana mihitsy ireo Malagasy miditra amin’ireny sehatra avo lenta iarahana amin’ny Vahiny ireny, kanefa mifono poizina sy manitsaka ny fiandrianam-pirenentsika.
Raha niezaka isika nizaka azy samirery teto niaraka tamin’ny fahaizana mitantana ireo harena sesehena nomen’Andriamanitra antsika, dia zakantsika ny fahaleovantena.
Jereo anie ireo firenena lehibe, na sahirana tahaka ny inona aza amin’izao aretina coronavirus izao, tsy mangataka na mandohalika aty amintsika. Nahoana isika no tsy maintsy mifampizara aminy ny loharanon-tsoa rehetra eto amin’ny Tanindra­zantsika?
Tsy tombony akory anefa no azo fa fatiantoka!
61 taona no lasa. Ilàna fahasahiana ny famadihana ny pejin’ny tan tara. Na io sainampirenentsika io aza, efa tany amin’ny taona 1958 no nandrafetana azy, fony I Madagasikara mbola tao anatin’ny « Communauté française ». Ilàna fandinihana amin’ny fo tony izany.
Torak’izany, tokony aparitaka manerana ny Nosy ireo fotodrafitr’asa mampitambatra sy mampiray ny Malagasy. Nilaza ny filoham-pirenena ankehitriny fa anisan’ izany, ohatra, ny kianja Barea Mahamasina.
Eo koa ny làlana an-kilaometatra maro hampitohy tanàna sy faritra manerana ny Nosy. Zavadehibe izany.
Mba ho zaka ny fahaleovantena, araka ny votoanton’ny resaka entiko androany, dia tsy maintsy miezaka ny mpitondra hikatsaka hatrany an’izay hampiray ny Malagasy fa tsy ny hampisaraka.
Hamaranako azy, ary entiko hirariana soa ny Malagasy rehetra, dia mba ho tena any ampon’ny olom-pirenena tsirairay mihitsy io fahazakana ny fahaleovantena io.
Misaotra ary hitahy ny Firenen­tsika hatrany Andriamanitra.
Razafindravahy Edgard. Mpitaridalana nasionaly ny antoko Antoka sy Dinan’ny Nosy (ADN).
Festivités du 26 Juin – Ruée vers les tickets d’entrée au stade Barea